5 Siyaabo kala duwan oo ay gubaan DVD lakabka Dual
DVD lakabka Dual
DVD lakabka Dual waxaa sidoo kale loo yaqaan DVD lakabka Double, oo keydin karta oo ku saabsan 8.5 gigabytes meesha DVD-hal lakab keydin karaa 4.7 kaliya gigabytes. DVD baahida Dual lakabka la casriyeeyay hardware iyo software inay ku gubtaa aad PC. DVD lakabka Dual waa in loo gudbiyaa DVD-9 cajalladaha oo aad akhriso oo ku qoran lakabka ugu hooseysa sida DVD-5. Waxaa jira codsiyada gubi DVD haystaa sacab muggiis kuwaas oo aad u faa'iido badan si ay u gubaan DVD-lakabka dual. Halkan, 5 codsiyada DVD lakabka gubi dual ayaa laga wada hadlaa si aad u hesho 5 siyaabo kala duwan si ay u gubaan aad DVD-lakabka dual.
5 DVD lakabka gubidda Dual
Nero Suite lagu xakamayn karaa iyadoo codsigan.
CD-yada maqalka, Saxannada Data iyo Video DVDs si fudud loo gubo oo karo.
Waxaa la ciyaaray iyadoo gubanaya DVD-lakabka dual.
Nero StartSmart abuuri doonaa sumadaha ama daboolida u DVDs la gubo, iyo CD-yada.
Waxa ay taageertaa ka kooban warbaahinta ka TV iyo internet.
Cajalladaha kabashada Data iyo gurmad lagu hayn karaa soo dumaya.
Wuxuu ku siinayaa sida ugu fiican Windows DVD-aragnimada samaynta.
Waxaa ku taageeri kara DVD lakabka gubashadii dual.
Waxay abuuri karaan images disk in ay mar dambe ku gubtaa.
Interface mid aad u fudud in la fahmo.
Afar siyaabo u masixi karaan DVDs rewritable iyo CD-yada.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad wax ka beddelo menu DVD sida aad door bidayso.
Waxay bixisaa DVD ah dual lakabka aad faylasha loo baahan yahay gubanaya.
Interface oo cad cad oo aad ku siin waayo-aragnimada shaqo fudud.
PGC Editor edit karaa faylasha aad hortiisa ka ololaya.
4. Hiro gubi
DVD-lakabka Dual oo loo qori karo codsigan.
Waxaa la cajalladaha rewritable qaban kara.
Khaladaad track Audio ee la marsiiyey karo.
Waxay abuuri karaan image files iyo gubi cajalladaha ISO.
DVD khaanada Downlaods, Blu-ray iyo CD-yada la gubo oo karo files image ka.
Waxa ay taageertaa-xawaaraha sare loogu DVDs ha baxaan.
Waa codsi miisaanka yar oo sahal u gubi kara DVD-aad.
Waxay bixisaa adeegyada ay gubaan DVD lakabka gubashadii dual.
Qaybta nasashada lakabka uu la kulmo si guul gubanaya lakabka dual.
5 Siyaabaha Guba DVD-lakabka Dual
1. Guba DVD lakabka Dual dhex Shuruudaha Hardware
Hel gubi ah DVD lakabka dual in ay arrintani ay suurtogal tahay. Sidaas, waxaad u baahan tahay in lagu hubiyo gubi lakabka dual intaadan gadan PC ah. Iyo in la hubiyo in aad PC ayaa gubi ah DVD gudaha u DVDs gubanaya.
Hubi in ay ku xidhmaan DVD gubi dibadda si aad PC via USB iyo iibsato DVD ah dual lakabka la jaan qaada gubi DVD ah.
2. Guba DVD lakabka Dual dhex Software Shuruudaha
Waxaa jira qaar ka mid ah codsiyada kuwaas oo awood u gubanaya DVD-lakabka dual. Nero StartSmart, PgcEdit ama ImgBurn gubi karaa disc lakabka dual.
Dhab ahaan baan u wada hadleen 5 software hore kuwaas oo aad u badan la socon kara DVD ku gubanayso lakabka dual.
3. Guba DVD lakabka Dual Isticmaalka StartSmart Nero
Burcad barnaamijkan ama Express Nero ay u doortaan disc aad u socotid inaad u samaysaa / gubashada.
Dooro "DVD 9" doorasho ka menu in hoos u muuqday hoose ee suuqa kala. Guji "Add" button menu loogu daray files ka PC.
Marka aad salaadda dhamaysatona ku daray dhammaan faylasha in la gubo oo, waxaad ka arki kartaa meelaha laga heli karo hartay u DVD lakabka dual. Ka dibna riix "Next" button in ay shaashadda final sida hoos ku qoran.
Hadda waxaad riixi kartaa batoonka for "Guba" ka dib markii gelinayn DVD ah lakabka dual galay gubi dibadda.
Hadda waxaad ka heli kartaa bar horumarka ka dib markii laga bilaabo hanaanka ku gubanayso. Waa idiin soo gudbin doonaa fariinta dhamaystirka si guul gubanaya.
4. Guba DVD lakabka Dual Isticmaalka PgcEdit
Dhig DVD disc ah dual galay gubi ah DVD dibadda DVD lakabka Dual. Hadda abuurtaan codsiga PgcEdit iyo abuuro mashruuc cusub oo DVD gubashadii lakabka dual. Ku dar files in aad u baahan tahay si ay u gubaan ee DVD-lakabka dual.
Ku dar files kuwa mashruuc aad u abuuray in la gubo ku saabsan DVD-lakabka dual. Hadda ka heli menu file iyo hoos u dhaqaaq "Guba DVD / Abuur ISO" si aad u hesho amarka gubanaya.
Waxaad hadda u yeelaan warqad drive u DVD lakabka dual ama kaliya uga tago caadiga ah. Xitaa looma baahna in aad wax ka bedesho, waayo wax walba waa faqaan.
PgcEdit idin tusin fariin xaaladda iyo dhamaystirka wax DVD lakabka dual.
5. Guba DVD lakabka Dual Isticmaalka ImgBurn
Burcad barnaamijka ImgBurn iyo dooran "Dhis" doorasho ka "Mode" menu.
Hadda waxaad riixi kartaa icon caleenta ku darto files si hab Dhis.
Hubi ee "VIDEO_TS" oo ka soo xusho menu kombiyuutarka.
Hadda waxaad xisaabi kartaa baaxadda image adigoo si fudud u gujinaya ah "xisaabiyaan" button dhankiisii ​​midig iyo xagga hoose.
Hadda waxaad ka heli kartaa qodobada fasax la heli karo iyo dooran ugu fiican ee mid ka mid idinka yeelay candidacies ah.
Hadda waxaad gelin kara DVD lakabka dual in DVD gubi iyo riix badhanka dhisayo ay u bilaabaan ku gubanayso.
Waxaad ka arki kartaa horumarka iyo fariin dhamaystirka qeybta saxda ah ee suuqa kala hoos macluumaadka.
Sida loo Beddelaan Quicktime MOV in DVD ah Player
Waxaad u ciyaari kartaa DVD on Wii - Haa, waxaad samayn kartaa
Top 10 DVD Best Players Ubuntu
Talooyin Dhibaatooyinka u cirib Common DVD ee Arrimaha
Hel Like Barnaamijka Best ku gacan-jabis for Windows (Mountain Libaaxa & Mavericks)
Windows DVD kii iyaga uumay uma gubi doonaa VOB? Xalka
Sidee si ay u gubaan DVD Files / DVD Folder u Free la ImgBurn?
Sida loo Beddelaan iyo Bedelka VHS inay DVD (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > DVD > 5 Siyaabo kala duwan oo ay gubaan DVD lakabka Dual